पुस ११ गतेदेखि सभामुख निर्वाचनः कसले मार्ला बाजी ? — onlinedabali.com
पुस ११ गतेदेखि सभामुख निर्वाचनः कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । सभामुखको लागि निर्वाचन आगामी पुस ११ गते हुने भएको छ ।
आज (शुक्रबार) बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलमा पुस ११ गते दिनको १ बजे अर्को बैठक बस्ने र सोही दिन सभामुख चयन प्रकृया सुरु गर्ने गरी सहमति भएको छ ।
पुस ११ गतेसम्म नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वारका लागि सहमति खोज्ने छ । यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुबीच संसद अधिवेसन र सभामुख चयन प्रकृयाबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा दुवै दलका नेताहरुबीच उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको जनाएको छ ।
संसद सचिवालयकै एक महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । रिक्त सभामुख पद पूर्ति हुन बाँकी रहेकाले आजको बैठकको अध्यक्षता तुम्बाहाम्फेले गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ९१ (४०) को व्यवस्थाअनुसार सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । सभामुख तथा उपसभामुख दुवैको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा भने ज्येष्ठ सांसदले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
शुक्रबार सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेसनको पहिलो दिन आज (शुक्रबार) बस्ने र एक साता स्थगित गरिने जानकारी दिइएको छ । आज पहिलो दिन राष्ट्रपतिले पठाएको संसद आव्हान सम्बन्धि पत्र सुनाइने र मौनधारण शोक प्रस्ताव मात्र पास हुने कार्यतालिका तय भएको छ ।